Travelers Choice 2020 By Tripadvisor - Amata Holding Public Company Limited | Official Website
Travelers' Choice 2020 by TripAdvisor.com
ကျွန်တော်များ Amata Group of Hotels မှ ဟိုတယ်များဖြစ်ကြသည့် Amata Garden Resort (Inle Lake),Amata Garden Resort(Bagan), My Bagan Residence by Amata (Bagan) နှင့် Amata Resort & Spa (Ngapali Beach)တို့သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ခရီးသွား Website ဖြစ်သည့် Tripadvisor မှပေးအပ်သော Travelers' Choice 2020 ဆုများကို ရရှိခဲ့ကြောင်း ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစွာ တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
🏅 Travelers' Choice 2020 ဆိုသည်မှာ TripAdvisor Website မှ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဟိုတယ်များ၏ reviewsများ ratingsများ အပြင် ခရီးသွားရန်အတွက် List အတွင်းထည့်သွင်းစဥ်းစား(Save in the list) သည့် အပေါ်မူတည်၍ အကောင်းဆုံး‌ဟိုတယ်များအဖြစ် ရွေးချယ်သောဆုဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ဟိုတယ်များနှင့် အခြားဆက်စပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၁၀% ကိုသာပေးအပ်သောဆုဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကြောင့် ယခုလို တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ၁၀%သော ထိပ်တန်းဟိုတယ်များအဖြစ် ပါဝင်အသိအမှတ်အပြုခံရခြင်းအတွက် အားပေးခဲ့ကြသော ဧည့်သည်တော်များနှင့် Tripadvisor Website တွင် Review များရေးသားပေးကြသူအားလုံးတို့အား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါသည်ခင်ဗျာ။
🏅 WE DID IT AGAIN!!!
Amata Garden Resort(Inle Lake),
Amata Garden Resort(Bagan),
My Bagan Residence by Amata(Bagan) and
Amata Resort & Spa(Ngapali Beach) are recognized asaTripAdvisor 2020 Travelers’ Choice with great traveler feedback consistently.
Each year, the team of TripAdvisor - the largest online travel platform - goes through reviews, ratings, and saves from travelers everywhere, and uses that info for award the very best.
Our hotels are nowapart of an exclusive group: only the top 10% of hospitality businesses around the globe.